Izindaba - Izinsizakalo zokwenza ngokwezifiso izingubo zangaphansi zamazwe ngamazwe:dizayine usayizi ofanele
Izinsizakalo zokwenza ngokwezifiso izingubo zangaphansi zamazwe ngamazwe:dizayina usayizi ofanele
Kumayelana nokuthola okufunayo.Ukulingana okulungile.Indwangu efanele.Imininingwane efanele.Isitayela esifanele.Abeluleki bethu bezithombe zomuntu siqu, abazi futhi njengabagqoki, bakusiza ukuthi ukhethe ezindwangu zangokwezifiso ezingaphezu kuka-2000.Singakusiza kuzo zonke izidingo zakho.
Ngezingubo zangaphansi zabesifazane, sihlinzeka ngomklamo, izinsizakalo zokukhiqiza, usayizi wezingubo zangaphansi, umklamo oqinile nokukhiqiza;Lawula ngokuqinile ikhwalithi yezingubo zangaphansi, ukuze unikeze izinsizakalo eziqaphelayo zokwenza ngokwezifiso izingubo zangaphansi.Imvula yaseXini iyakuqonda ukuthi umatasatasa kangakanani.Noma ngabe kusehhovisi lakho noma ekhaya, sijwayele izidingo zakho ohlelweni lwakho.Isikhathi siwukunethezeka kokugcina - futhi yilokho esikunikeza khona.
I-Xinzi Rain Apparel co., LTD., eyasungulwa ngo-2004, yaklonyeliswa ngesihloko esithi "Top Ten Brand", isihloko somkhiqizo othembekile we-International Sales Top Ten Trusted, njll.Umsunguli wesakhiwo esiphusile kusenesikhathi esisekelwe ekuhlelweni kwenkampani, umise amakhulukhulu ezitolo zomkhiqizo, izitolo namagatsha nama-ejensi, ahlanganisa izifundazwe ezicishe zibe ngu-30 nomasipala basekhaya.Ihileleke kakhulu kumasethi e-Bra&Brief, i-Lingerie, Izingubo Zezemidlalo kanye ne-Plus Size Bra&Panties.
Ifektri yethu ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angu-8000, imigqa yokukhiqiza engaphezu kuka-20, futhi yamisa amagatsha e-Guangdong, isethi Ukuthuthukiswa, Ukuklama, Ukukhiqiza, Ukuthengisa njengenye yenkampani yeqembu.Ukusetshenziswa okunembile ukotini, usilika kanye ne-satin nezinye izinto ezithinta isikhumba ku-spindle yomkhiqizo, vumela imfudumalo yokudala, inhliziyo enalitini nentambo ukuze bazane.
Obhodisi bethu nezingubo zangaphansi zingabeluleki bekhabethe nezithombe, bazi kahle ngezindwangu, isitayela namaphethini.Sihlela, sixhumanisa, futhi sinakekela ikhasimende lakho, ukuze ligqoke kahle kunoma yisiphi isimo.
Ukuze uthintane Nesevisi yangokwezifiso: i-OEM/ODM, isevisi yokuklama, ukwenza amasampula, i-MOQ, ukukhiqizwa kwenqwaba, isikhathi sokulethwa, isikhathi sokuthumela, isiqinisekiso sokukhokha kwakho, imboni yethu, abantu bethu, imikhiqizo yethu njll., pls zizwe ukhululekile ukusithumelela i-E -mail, shiya umlayezo wakho, engeza inombolo ye-whatsapp, noma usishayele, wamukelekile kakhulu!